Maxaa beri kala heysta Xulalka Somalia iyo Burundi? (CECAFA) - Caasimada Online
Home Warar Maxaa beri kala heysta Xulalka Somalia iyo Burundi? (CECAFA)
Maxaa beri kala heysta Xulalka Somalia iyo Burundi? (CECAFA)
Waxaa maalinta axada oo taariikhdu tahay 25-ka bisha November ka dhici doonta garoonka kubada cagta ee Kampala stadium cayaar ka mid ah cayaaraha tartanka kubada cagta bariga iyo bartamaha afrika oo sanadkan ay martigalinayso Uganda.
Waxaa socanaya diyaar garow xoogan oo kooxaha cayaaraya ay isugu mindiyo afaysanayaan cayaarahaas.
Kooxaha ugu horeeya ee cayaarta lagu furayo ayaa kala ah xulula kubada cagta Somalia iyo Burundi.
Soomaalida ku dhaqan magaala Kampala ee wadanka Uganda ayaa wada qaban qaabo xoog leh oo ay ku doonayan ka qayb qaadashada cayaarta ugu horeysa, waxaana ay ku ballameen dhuhurnimada Axadda ah in ay isugu yimaadaan xaafada Kesenya si halkaa basas dhaa dheer uga raacaan iyaga oo gacmaha ku sita calanka Soomaliyed si ay u buuxiyan garoonka una muujiyan wadaniyadnimadooda iyo taageerada ay u hayaan walaalahooda Soomaaliyeed.
Hadaba waxaa laga wardhowrayaa kooxda badin doonta cayaarta dhexmareysa Somalia iyo Burundi.
W/Q: Weriye Mahad Cabdi Maxamed Shaakir.
Kala soo xiriir shaakir30@hotmail.com